ओसीडीको साथ एक महामारीको समयमा बाँचिरहेका: अनियंत्रित नियन्त्रण - समुदाय | सेप्टेम्बर 2021
घरपालुवा जनावर समाचार औषधि जानकारी, समाचार प्रेस समुदाय, कम्पनी कम्पनी, समाचार कम्पनी, चेकआउट समुदाय भारी खेल कल्याण औषधि बनाम मित्र खेलहरु औषधि जानकारी कम्पनी, स्वास्थ्य शिक्षा स्वास्थ्य शिक्षा, घरपालुवा जनावर
मुख्य >> समुदाय >> अनियन्त्रितलाई नियन्त्रण गर्दै: महामारीको समयमा ओसीडीको साथ बाँचिरहनु
अनियन्त्रितलाई नियन्त्रण गर्दै: महामारीको समयमा ओसीडीको साथ बाँचिरहनु
अघिल्लो वर्ष, जब COVID-१ stay-मा-घर आदेश आदेश मा गए, मैले मेरो भिडियो my-- र १० बर्षे नातिनाका साथ कुराकानी गर्न शुरू गरें। प्रत्येक हप्ता, उनीहरूले ठूलो स्वरले कथा पढ्ने गर्थे। कान्छो, तस्विर पुस्तकहरू पढ्ने, प्रायः पुस्तक पल्टिन र मलाई चित्रहरू देखाउन रोकिन्थ्यो। यसले मलाई त्यहाँ सँगै भएको अनुभूति गरायो, यस मार्फत।
को रूप मा हल्का जुनूनी - बाध्यकारी डिसऑर्डर (OCD) को साथ, यी साप्ताहिक कल दुई उद्देश्यका लागि। यो एक आत्मीयता थियो जुन हामीसंग मेरो व्यस्त तालिकाको कारणले सामान्यतया समय हुँदैन। तर अझै पनि, यसले मेरो असमर्थित डरलाई हटायो किनकि म सक्षम थिएँ हेर्नुहोस् प्रत्येक केटाहरू र थाहा छ कि तिनीहरू स्वस्थ र अस्थिर समयमा राम्रो थिए।
यी मध्ये एक कलको समयमा, मेरी छोरी चिन्तामा थिई, मैले भावनात्मक हिसाबले महामारीको सामना गर्नुपर्दा कति राम्रो गरीरहेकी थिएँ, आमा, तपाईं हुनुहुन्थ्यो बनेको महामारीको लागि! उनी ठट्टा गर्छिन्। एक अर्थमा, उनी सहि छन्। मैले घरबाट वर्षौं काम गरें। ती जस्तो नभई जो एक्कासी मा घुसिए घर बाट काम गर्ने विदेशी क्षेत्र , अनमोटिभेट भएमा मलाई ट्र्याकमा रहन मद्दत गर्नका लागि संरचनाहरू राख्ने काम सिकेको थिएँ, साथै काम गर्ने बित्तिकै रोक्न पनि मैले सिकेको थिएँ।
मेरो लागि त्यस सम्बन्धमा धेरै परिवर्तन भएको छैन त्यसैले पृथक र घरमा बस्नु सामान्य महसुस गर्‍यो। OCD सँग बस्न सक्ने कसैलाई, यद्यपि, महामारीको नियन्त्रणको अभावले मलाई बिग्रेको लक्षणहरूको लागि खुला छोड्दछ। मेरो बाध्यता दृश्यात्मक छैन, तर त्यसले तिनीहरूलाई कुनै पनि कम पीडादायी बनाउँदैन। हात धुनु भन्दा, वा अरू प्रदर्शन गर्नु भन्दा देखिने गरी दोहोरिने ब्यवहार, म मेरो दिमागमा गणना गर्ने र म डरलाग्दो परिस्थितिलाई के ठानेँ भनेर बेवास्ता गर्ने झुकाव राख्छु — र यसको साथ, जुनूनी विचारहरू आउँछन्।
जबसम्म म सम्झन सक्दछु मसँग व्याकुल झुकावहरू थिए। मैले मेरा बच्चाहरूका बारे रातमा चिन्ता गर्दै वर्षौं बित्यो, सुत्ने असमर्थ भए सम्म मैले उनीहरूलाई सुरक्षात्मक बबलमा नदेखेसम्म। किराना पसलमा, मैले किराना सामानहरूमा के खर्च गरिरहेको थिएँ भनेर मेरो टाउकोमा दौडको तालमेल रहेको थियो। मैले सोचें कि म यो बजेटमा रहेछु भनेर निश्चित गर्नका लागि गरिरहेको थिए - र यो त्यस्तो भएको हुन सक्छ - तर सार्वजनिक रूपमा चिन्तित हुनबाट आफूलाई जोगाउन यो सुखदायक प्रविधि बन्यो।
बाटोमा, राजमार्गमा सवारी चलाउने डर फोबियामा परिणत भयो। मैले यो पूर्ण रूपमा गर्न रोकिदिएँ र यसको सट्टामा केवल मेरो छेउमा सडकहरू लिन बाहिर गयो। म के बारे मा ओब्लिस हुन सक्छ यो घटना जस्तै कारको अगाडि दौडिरहेको हिरण, टायर बाहिर उड्ने, वा कुनै पनि सम्भाव्य — अझै अनियन्त्रित — घटनाहरू जस्ता हुन्छ। मैले यो जुनसुकै सोचलाई हटाउन सक्ने एकमात्र तरीका भनेको राजमार्गमा कुनै पनि हालतमा गाडी हाँक्नुबाट जोगिनु हो।
ओब्सनहरू, र त्यसपछिको आत्म-सुखदायक बाध्यताहरू, साधारण छन्। अमेरिकामा चिन्ता र डिप्रेसन एसोसिएसनका अनुसार 40० वयस्कमा १ र संयुक्त राज्यमा १०० बालबालिका १ मध्ये १ को ओसीडी छ। ADAA )। जुन जुन अनावश्यक विचारहरु, चित्रहरु, र आग्रहहरु समावेश गर्दछ। यी बाध्यताको पछि आउँछन्: व्यवहारले एक व्यक्तिलाई यी विचारहरूले निम्त्याउने समस्या वा चिन्ता कम गर्नका लागि प्रदर्शन गर्न आवश्यक महसुस गर्दछ।
चिन्ताहरू तब तीव्र हुन्छन् जब ओसीडीले आफ्नो वातावरण नियन्त्रण गर्न सक्दैनन् र लक्षणहरू असंख्य तरिकामा प्रकट हुन्छन्, हात धुनेदेखि लिएर किराना पसलमा क्यान व्यवस्थित गर्न को लागी, वर्णन गर्दछ शान फिबेल , गर्नुहोस्, स्टाफ मनोचिकित्सकHOPE को Lindner केन्द्र। तर धेरै व्यक्तिको आवेग र बाध्यताहरू उनीहरूको दैनिक जीवनलाई ट्रेल गर्दैनन्। डा। फिबेल भन्छन् OCD का साथ धेरै व्यक्ति ... आफ्नो रीतिरिवाज गर्न समय खर्च गर्छन्। तिनीहरू आफ्नो दिन मार्फत जान्छन् र यसले उनीहरूको कामलाई बिगार्दैन।
सम्बन्धित: OCD तथ्या .्क
OCD को लक्षणहरू पहिचान गर्दै
म कार्यात्मक र मेरो दिनहरु मा पार गर्न सक्षम थियो सम्म एक दर्दनाक अनुभव मलाई महसुस गर्न को लागी म मात्र जुनसुकै भन्दा बढी थियो। यो अपदानित एपेंडिसाइटिसको केसबाट सुरू भयो जुन एक फूटिएको परिशिष्ट, अस्पतालमा सात दिन, र एक महिना पछि शल्यक्रियाको कारण भयो। म अस्पताल बाट छुटे पछि, मेरो जुनून बढेको र मेरो सुखदायक तरिकाहरू काम गरिरहेको थिएन। यो पहिलो पटक होशियार भए कि मेरा लक्षणहरू अधिक थिए। म एउटा थेरापिष्टको लागि पुगें।
vagisil विरोधी खुजली क्रीम खमीर संक्रमण को उपचार गर्दछ
म जस्तो, OCD को साथ सबैलाई थाहा छैन कि उनीहरूको जुनून र बाध्यता सामान्य छैन। यो केवल जब उनीहरूले दैनिक दिनचर्यामा हस्तक्षेप गर्छन् जुन उनीहरू ध्यान दिईन्छ, जसको लागि उपचार लिन सम्भावित समस्या हो।
यस अनुसार मानसिक स्वास्थ्य को राष्ट्रीय संस्थान , साझा जुनूनहरू समावेश:
इन्ट्रासिभ विचार वा छविहरू जस्तै संक्रमण वा कीटाणुहरूको डर
सममित र व्यवस्थित चीजहरूको आवश्यक छ
नियन्त्रण गुमाउने र आफू वा अरूलाई हानी गर्ने बारे आक्रामक विचारहरू
अनावश्यक निषेध, वा वर्जित, विचारहरू
दोहोरिने ब्यवहारहरू कि चिन्ता कम गर्ने प्रयासमा यी विचारहरू पछ्याउँदछ ul बाध्यताहरू include समावेश गर्न सक्दछ:
जाँच गर्दै (उदाहरणका लागि, ढोका बन्द छ, स्टोभ बन्द छ)
कडा तालिका अनुसरण गर्दै
यी सामान्य उदाहरणहरू हुन्, तर जुनसाहरू र बाध्यताहरू भिन्न हुन्छन्।
Nuvaring काम गर्न कति समय लाग्छ?
मेरो OCD को उपचार गर्दै
मेरो थेरापिस्ट संज्ञानात्मक व्यवहार थेरापी (सीबीटी) मा विशेषज्ञ। यो कुरा गर्ने एक प्रकारको उपचार हो जसले सोच र व्यवहारको अप्रिय पैटर्नलाई पुनःनिर्देशित गर्न कार्य गर्दछ। हामीले एक्सपोजर र प्रतिक्रिया रोकथाम (ERP) मा काम गर्यौं, एक प्रविधिको जसले बिस्तारै उत्तेजित गराउँदछ जसले चिन्तालाई खराब समस्यालाई निम्त्याउँदछ। यो मानिन्छ पहिलो-लाइन उपचार OCD को लागि र केन्द्रीय स्नायु प्रणाली (सीएनएस) लाई नियमन गर्न मद्दत गर्न सक्छ, रोजान क्यापन्ना-होज, एड.डी, मनोवैज्ञानिक, बाल रोग विशेषज्ञ स्वास्थ्य, र संस्थापक भन्छन्ग्लोबल इंस्टिट्यूट अफ चिल्ड्रेन्सको मानसिक स्वास्थ्य। यसले तपाईंलाई चिन्ता र उदासिनतामा फेरि कुरा गर्न सिकाउँछ। यसले सुदृढीकरण गर्दछ कि यो त्यस्तो व्यवहार हो कि अनलरिन गर्न सकिन्छ, तपाईको नियन्त्रण बाहिरको न्यूरो ट्रान्समिटरको भन्दा।
मेरो मामलामा, ड्राइभि myले मेरो लक्षणहरू ट्रिगर गरिरहेको थियो - एउटा सास फेर्ने भावनाले मलाई पा thinking्ग्रामा पछाडिबाट बाहिर निस्किन्छ भनेर सोच्न छोडिदियो। ERP ले बिस्तारै मलाई नियमित र सुरक्षित रूपमा ड्राइभि experienceको अनुभव गर्न मद्दत पुर्‍यायो, जसले गर्दा यसले सामान्य महसुस गर्न थाल्छ, र मैले थोरै उत्तेजित महसुस गरें। यस प्रक्रियालाई आदित्य भनिन्छ, र यसले मलाई मेरो जुनसाहरूलाई नियन्त्रणमा राख्न मद्दत गर्‍यो।
क्यापना-होज वर्णन गर्दछ, OCD लुप भाँच्न, यो सिकेका व्यवहारलाई उल्टाउनु एक कठोर र विधिगत उपचार हो। OCD सँधै चिन्ताको साथ सुरू हुन्छ। कसैलाई चिन्ता छ भने यदि उनीहरू चाकुहरुका ड्रयरको नजिक गए भने कि त्यसले कसैलाई हानी पुर्याउला। अधिक तिनीहरूले यसलाई टाढा, अधिक जुनून वास्तवमा आफूलाई फीड। थेरापी बिना, तिनीहरूसँग आफैलाई उजागर गर्ने र भन्न सक्ने क्षमता नहुन सक्छ, 'यो हास्यास्पद हो।' र यसैले चक्र बिच्छेद गर्दछ।
सीबीटीको अतिरिक्त, अन्य उपचार विकल्पहरूले लक्षणहरूलाई कम गर्न औषधीहरू, र एक स्व-हेरचाह गर्ने पद्दति समावेश गर्दछ जसमा गुणस्तर आराम, पौष्टिक आहार, र तनाव कम गर्न व्यायाम समावेश छ। सबै भन्दा राम्रो उपचार योजना यी सबै विधिहरूको संयोजन समावेश गर्दछ।
थेरापीको क्रममा मैले महसुस गरें कि मेरो डरको सामना गर्नुपर्‍यो - र अझ महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने यो डरको कुरा हो कि मलाई के भयो भने मात्र मलाई सजिलै दोहोर्‍याएर र परिस्थितिमा अभ्यस्त भएँ।
यो सबै महामारी भन्दा अघि थियो, हो। मैले मेरो थेरापिष्टको साथ एक वर्ष बिताए र विश्वव्यापी महामारी जस्ता तनावपूर्ण घटनाहरूले लक्षणहरू ल्याउन सक्छ, मैले प्रगति गर्न जारी राखेको छु।
सम्बन्धित: OCD उपचार र औषधिहरूको बारेमा बढि जान्नुहोस्
COVID-19 महामारीको समयमा OCD का साथ बस्दै
यद्यपि म राम्रो तरीकाले काम गरिरहेको छु (र अझै पनी छ) हुलाक कार्यालय र किराना स्टोरमा साप्ताहिक यात्रा बाहेक, भाइरसको डरले कहिलेकाहीं व्याकुल सोचाइलाई निम्त्याउँछ, जसले अक्सर बाध्यकारी सफाई र संगठित गर्दछ। म भी चिन्ता गर्छु कि यो समय घर मा रहँदा मलाई घर छोड्न डर लाग्न सक्छ। म आफैंलाई साप्ताहिक भ्रमण गर्न बाध्य पार्छु धेरै टाढा राख्न र नयाँ फोबिया विकास गर्नबाट रोक्नको लागि।
म कृतज्ञ छु कि कीटाणुहरू मेरो जुनसुकै अंशको होईन, तर मैले मेरो ड्राईभि anxietyको चिन्तामा नजर राख्नु पर्छ। जब म थेरापिस्टलाई हेरिरहेको थिएँ, एक बिन्दुमा, निराश भएँ कि म सक्दिन सोच्नुहोस् मेरो चिन्ताबाट बाहिर निस्कदै उनले भने, 'तर तपाईंको सोच समस्या हो! सम्भवतः हाम्रो सल्लाहको बर्षमा उसले मलाई भनेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यही थियो। संगीतले मलाई मेरो टाउकोबाट बाहिर निस्कन र व्याकुल सोच हटाउन मद्दत गर्दछ। म काम गर्ने क्रममा मजाक कम गरी दिन्छु, मेरो सोच्न रोक्न र सुत्न मद्दत गर्न अन्तर्दृष्टि टाइमर जस्ता ध्यान अनुप्रयोगहरू प्रयोग गर्दछु, र गाडीमा संगीत बजाएर मेरो विचारहरू भंग गर्दछ।
यस अनियन्त्रित समयमा पार गर्न र चिन्ता कम राख्न, मैले केही उपायहरू लागू गरेको छु जसले मलाई सामना गर्न मद्दत गर्दछ:
कुकिंगले मलाई तल काम गर्नेबाट कम समयमा संक्रमण गर्न मद्दत गर्दछ र मेरो रचनात्मकतालाई स्टोक गर्दछ।
व्यायामले केही तनाव कम गर्दछ। मैले दैनिक पदयात्रा गर्न थाले र अनलाइन नृत्य कक्षामा पनि सामिल भएँ।
साप्ताहिक भिडियो च्याटहरूको अनुसूचीले मलाई साथीहरू, परिवार, र सहकर्मीहरूमा जडानको भावना महसुस गर्न दिन्छ।
डूम स्क्रोलिंग र समाचार पढ्ने सीमित गर्नाले मलाई चीजहरूलाई परिप्रेक्षमा राख्न मद्दत गर्दछ।
टेलिथेरापी प्रयोग गर्नाले मलाई मेरो लक्षणहरूको शीर्षमा रहन अनुमति दिन्छ।
स्पष्ट रूपमा, COVID-19 को अवधिमा म मेरो सफलतामा एक्लो छैन। धेरै OCD बिरामीहरू यस वास्तविक, अस्पष्ट संकटको बिचमा राम्रो प्रगति गरिरहेका छन्, को अनुसार येल स्कूल मेडिसिन । यो वास्तविक महामारी भन्दा खतरा कम छ, जब दैनिक दिन प्रति दिन को जीवन को अनिश्चितता ह्यान्डल गर्न अधिक गाह्रो छ कि बाहिर जान्छ।
कवि आर्किबाल्ड म्याकलिशले भने, अनुभवबाट सिक्नु भन्दा केवल एउटा मात्र दुखदायी हुन्छ, र त्यो हो अनुभवबाट सिक्नु हुँदैन। यस बर्षमा फर्केर हेर्दा, म यो उद्धरणको बारेमा सोच्छु। मैले भोगेका चीजहरू, र मैले आफैंलाई बुझ्नको लागि गरेको कामले मलाई यस महामारीको नेभिगेट गर्न मद्दत गरेको छ।
ट्रेसिबा बनाम ल्यान्टस: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि उत्तम छ
अवसाद र चिन्ता को लागी सबै भन्दा राम्रो उपचार के हो
गर्भावस्था को लागी काउन्टर मतली मेड मा
जन्म नियन्त्रण मुँहासे कहिले सम्म खाली गर्न को लागी
रक्सी संग के दुखाई निवारक लिन सक्नुहुन्छ
मतली र पेट खराब को लागी के लिने